OTU ESI ACHỌTA ADREESỊ IP NKE RAWỤTA - NGWA - 2019
Ịchọpụta Adreesị IP nke router
The library d3drm.dll bụ otu n'ime components nke ngwa DirectX nke a chọrọ iji na-agba ọsọ ụfọdụ egwuregwu. Mmehie kachasị na-apụta na Windows 7, mgbe ị na-agbalị ịnwa egwuregwu nke ntọhapụ 2003-2008 site na iji Direct3D.
Ngwọta nwere ike ịgwọ maka nsogbu d3drm.dll
Ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu dị n'ọbá akwụkwọ a ga-abụ ịwụnye mbipute ọhụrụ nke ngwa Xx X: faịlụ ahụ ị na-achọ na-ekesa dịka akụkụ nke nkesa nkesa maka akụrụngwa a. Idozi akwụkwọ nke DLL a na ntinye ya n'ime nchekwa usoro ahụ dịkwa irè.
Usoro a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mfe maka nbudata ma wụnye faịlụ DLL.
Mepee Client Files DLL wee chọta nyocha ọchụchọ.
Tinye ya na d3drm.dll ma pịa "Gbaa ọchụchọ".
Pịa aha nke faịlụ ahụ.
Lelee ma ọ bụrụ na achọtara mmemme ahụ ịchọrọ, wee pịa "Wụnye".
Mgbe usoro nbudata obere, a ga-arụnye ọbá akwụkwọ ahụ.
Mgbe ịmechara usoro ahụ, a ga-ewepụ nsogbu ahụ.
Usoro 2: Wụnye DirectX
D3drm.dll ọbá akwụkwọ na nsụgharị nke Windows ugbu a (malite na Windows 7) bụ ihe na-adịghị eji egwuregwu na mmemme, ma achọrọ ka ịmee ụfọdụ ngwanrọ ochie. N'ụzọ dị mma, Microsoft ewepụghị faịlụ a site na nkesa, nke mere na ọ dịkwa na nsụgharị ọhụrụ nke ngwugwu nkesa.
Gbaa nhazi ahụ. Nabata nkwekọrịta ikike ahụ site na ịlele igbe nlele kwesịrị ekwesị, wee pịa "Na-esote".
Na window ọzọ, họrọ ihe ndị ọzọ ịchọrọ ịwụnye, wee pịa "Na-esote".
Nbudata na ntinye nke DirectX components amalite. Na njedebe ya, pịa "Emere".
Ya na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị omimi metụtara Direct X, d3drm.dll ga-arụnyere na usoro ahụ, nke ga-edozi nsogbu niile metụtara ya.
Usoro 3: Download d3drm.dll na ndekọ usoro
Usoro ngbanwe nke usoro 1. N'okwu a, onye ọrụ ga-enwerịrị onwe ya ịchọta ebe a na-achọghị aka na draịvụ ike, wee jiri aka tinye ya na otu n'ime nchekwa nchekwa dị na ndekọ Windows.
Ndị a nwere ike ịbụ nchekwa. "System32" (nsụgharị x86 nke Windows 7) ma ọ bụ "SysWOW64" (x64 version nke Windows 7). Iji dokwuo anya nke a na nuances ndị ọzọ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ ihe gbasara itinye akwụkwọ faịlụ DLL.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ịkwesịrị ịdebanye aha na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe gị - ma ọ bụrụ na njehie ahụ ka ga-anọgide. A kọwara algorithm nke usoro a na nkuzi kwekọrọ na ya, ya mere nke a abụghị nsogbu.